Ikhaya » Amanqaku eendaba akutshanje » Airlines » U-Air Astana ufumana inqwelo moya yakhe yesithandathu yeAirbus A321LR
Airlines • isikhululo • uhambo ngomoya • Ukwaphula Iindaba Zamanye Amazwe • Iindaba eziziiNdaba zokuHamba • Ukuhamba ngeshishini • Iindaba zaseKazakhstan • iindaba • Ukwakha kwakhona • Xanduva • Tourism • uthutho • Ukuhlaziya indawo ekuyiwa kuyo • Iindaba zeWired Travel • Iindaba ezahlukeneyo
Iinqwelo moya zeAirbus A321LR zisebenza kuthungelwano lwenqwelomoya, kunye neendawo ezibandakanya iDubai, iFrankfurt, iLondon (ukusukela ngoSeptemba 2021), Istanbul, Sharm el-Sheikh (Egypt) nasePodgorica (Montenegro).
Zonke iinqwelo moya zeAir Astana zeA321LR ziqeshwe kwiArhente yokuQeshisa ngoMoya.
I-Airbus A321LR ixhotyiswe ngezinjini zePratt kunye neWhitney.
Iinqwelo moya zeAirbus A321LR zisebenza kwinethiwekhi yeAir Astana yamanye amazwe.
I-Airbus A321LR entsha yeAir Astana ifike kwisikhululo seenqwelomoya i-Nur- Sultan International Airport ngqo ivela kumzi-mveliso we-Airbus eHamburg, eJamani namhlanje. Zonke iinqwelo zeAirbus A321LR ziqeshiwe kwiArhente yokuQeshisa ngoMoya, ngenqwelomoya yokuqala efika ngoSeptemba 2019 kwaye enye yoluhlobo ifanele ukuhanjiswa ngaphambi kokuphela kuka-2021.
The Airbus I-A321LR ixhotyiswe ngeinjini zePratt kunye neWhitney ezizukulwana zakutshanje, ezinciphisa ukusetyenziswa kwepetroli ngama-20%, iindleko zolondolozo nge-5%, ukukhutshwa kwekhabhoni ngama-20% kunye nenqanaba lengxolo ngama-50% xa kuthelekiswa nokudala kwenqwelomoya. Le ndlwana iqulunqwe ngezihlalo ezili-16 zokulala phantsi eklasini yezoShishino kunye nezihlalo ezili-150 kwiklasi yezoQoqosho, zonke izihlalo zixhotyiswe ngezikrini ezizodwa.
Iinqwelo moya zeAirbus A321LR zisebenza kwinethiwekhi yenqwelomoya yenqwelomoya, eneendawo ezibandakanya iDubai, Frankfurt, London (ukusuka ngoSeptemba 2021), Istanbul, Sharm el-Sheikh (Egypt) nasePodgorica (Montenegro).
The Inzululwazi yasemoyeni Iqela lisebenza ngeenqwelomoya ezingama-35 ezibandakanya i-15 Airbus A320 / A320neo, 12 Airbus A321 / A321neo / A321LR, ezintathu ze-Boeing 767 kunye ne-Embraer E190-E2 ezintlanu, zizonke zibandakanya i-A320 ezilithoba kunye ne-A320 neo kunye necandelo le-LCC, IFlyArystan. Umyinge weminyaka yobudala beenqanawa zeAir Astana yiminyaka emithathu kuphela, ukuyenza ibe lelona lincinci emhlabeni.